Mayelana NATHI - I-LifeBogger (Izindaba zebhola lezinyawo zebhola lezinyawo kanye namaqiniso e-Biography)
Siyakwamukela ku LifeBogger! Ikhaya lezindaba zebhola leqiniso.
Abathandi bebhola abaqeqeshiwe, abaphathi bebhola kanye nabadlali abancane banazo Zonke Izindaba Zobuntwana kanye ne-Biography Amaqiniso. I-LifeBogger ithumba lezi zikhathi ezingenakulibaleka ezijabulisa futhi zithinta inhliziyo.
Ipulatifomu yethu ihlinzeka kakhulu, i-Childship Stories emangalisa kakhulu, emangazayo nethokozisayo ye-Biography Amaqiniso e-footballeers (esebenzayo / esethathe umhlalaphansi), abaphathi bebhola nabadlali abaphambili. Sifaka imicimbi ephakeme kusukela ezikhathini zabo zobuntwana kuze kube lapho baziwa kakhulu.
Kuyamangaza ukubona ukuthi abadlali bebhola lezinyawo, abaphathi kanye nama-elites akhula kanjani kusuka ezinganeni ezinhle kuya kwizazi. Umgomo wethu ukugxila ezenzakalweni ezenzeka ezimpilweni zalaba bantu, esezaziwa lapho ziqala ukwazi.
Mission yethu: Ukuze ube phakathi koMthombo Ohamba phambili Wedijithali Wezindaba Zokukhula Kwezingane kanye Namaqiniso we-Biography.
I-LifeBogger ilwela ukuba phakathi kwenkundla yebhola ebilwayo ethi "Okuhamba phambili" eku-inthanethi yezindaba zezingane kanye ne-Untold Biography Facts yabathandi bebhola (bobabili abasebenzayo nabathathe umhlalaphansi), abaphathi nabaphathi bebhola.
Ngokwenza lokho, siqinisekisa ukuhlinzeka abafundi bethu abahlonishwa kakhulu okuqukethwe (inani le-premium) okuzobenza babuye nokuningi.
Izindatshana zethu ziqukethe ukuhlaziya okugcwele kwabaqeqeshi bebhola lezinyawo zabo / abaphathi / abancane bokuqala, isizinda somndeni, impilo yomsebenzi wokuqala, umgwaqo / ukukhuphuka kokuqamba amaqiniso we-biography, impilo yomndeni, impilo yobudlelwano, impilo yomuntu siqu, indlela yokuphila namaqiniso angenakuphikwa.
Umgomo Wethu: Ukwakha futhi kugcinwe indawo yokugcina yabadlali bebhola.
Kulinganiselwa ukuthi ngaphezu kwengxenye yabantu abasemhlabeni bazithatha njengabalandeli bebhola lezinyawo (abalandeli) noma abalandeli. Lokhu kusho ukuthi abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezine emhlabeni jikelele babukela ibhola okuyinto umdlalo owaziwa kakhulu emhlabeni.
Ngenkathi singenzi izindaba zebhola ezilandayo noma sinikeze amamaki akamuva noma ama-10s aphezulu, inhloso yethu ukugcina umlando wobuntwana webhola lomdlalo we-digital kanye nokugcinwa komlando we-biography kuwo wonke fan.
Ithemba lethu ebuntwaneni bebhola kanye ne-biography lithembele ukunika abalandeli bebhola ulwazi olwengeziwe ngabadlali ababathandayo zonke izinsuku zomdlalo ku-TV. Ngakho-ke, akugcini ngokubuka ibhola kodwa ukulifunda.
Amagugu ethu: Okuqukethwe kwekhwalithi ne-Passion.
Okuqukethwe kwekhwalithi: I-LifeBogger ilwela ukuhlinzeka ngokuqukethwe okuvelele okunikezela inani le-premium kubathandi bebhola emhlabeni jikelele.
Isifiso: Sikholwa ukuthi Ibhola (Soccer) lihambisana nentshisekelo, imizwa, injabulo kanye nokuzinikela. Ngakho-ke, siletha ugqozi ekubhaleni izindaba zebhola ebuntwaneni kanye ne-Untold Biography Amaqiniso.
Iqiniso liwukuthi, ukubhala okuqukethwe kwebhola nokwenza intshisekelo yalo kusidle, kusenze sikholelwe ukuthi yiClionion Call.